Home Wararka Kooxo hubeysan oo dad shacab ah ku dilay duleedka magaaladda Gaalkacyo
Magaalada Gaalkacyo xarunta Gobolka Mudug waxaa ka dhacay Dilal la xiriira aano qabiil, qof kamid ah dadka Magaaladaas ayaa lagu dilay Suuqa Ariga Gaalkacyo, maleeshiyaad ku heyb ah Ninka la dilay ayaa afduubtay labo ruux oo kale iyaga oo ku dilay isla Magaalada.
Sida warbaahinta ay u xaqiijiyeen ilo deegaanka ah, Maleeshiyada dilalka geysatay ayaa kasoo kala jeeda Koofurta Gaalkacyo oo maamul ahaan hoostagta Galmudug & Waqooyiga oo ah qaybta ay maamusho DG Puntland.
Ciidamada Ammaanka Dowlad-Goboleedyada Puntland & Galmudug ayaa billaabay howlgallo ay kusoo qabanayaan Maleeshiyaadka Dilalka aanooyinka ah ka geystay Magaalada Gaalkacyo xarunta Gobolka Mudug.
Gaalkacyo sanadihii dambe waxa ay ka xasilooneed dilalka aanooyinka wixii ka dambeeyay heshiiska Galmudug & Puntland ay ku gaareen in wadajir ay uwada howlgalaan ciidamada labada Dowlad-Goboleed waxaa meesha ka baxay dilalka maleeshiyo beeleedyada.
Saraakiil katirsan Dowlad-Goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa sheegay in ay ku raad-joogaan maleeshiyaadkii dilka geystay, Gaalkacyo waxaa la hadal hayaa saddexda ruux ee lagu dilay Xarunta Gobolka Mudug.
Previous articleDowlada Itoobiya oo ka hadashay booqashada Muse Bixi & xiriirka Farmaajo
Next articleThe Horn Of Africa States: A Proposition – OpEd
Soomaaliya iyo Eritereeya oo la saftay Itoobiya, qaadacayna go’aanka UNHRC
Maxaa ka jira in MW Axmed Madoobe iyo MW Dani ay...